Saaxiibkii itoobiya cadowgii soomaaliya
Fidel Casto oo ay da ka daba timid ayaa xaaladiisa caafimaad aanay fiicnayn xukunkiina waxaa uu ku wareejiyey walaalkiis Raul Castro.
November 1977 ilaa February 1978 Fidel Castro waxaa uu soo daabulay askar dhan 17,000. Fidel Castro asagoo isticmaalaya hubka taageerada xulafadiisa WARSOW ayuu laayey Soomaali badan. Fidel Castro sidaas ayuu taariikhda Soomaalida baal madow uga galay.
Furitaanka Garoonka Dayuuradaha ee Muqdisho waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 8, 2006
Xaflad Sanadeedkii 5aad ee Habeenka Waxbarasha Soomaalida Minnesota oo si wanaagsan u qabsoontay: Wardhere